ဒုတိယအရွယ်၏ ပထမဝေဒနာ **** ( စ / ဆုံး ) – Grab Love Story
ကျနော်နာမည်က ကိုကိုကြီး…..အသက် ၄၀ အိမ်ထောင်ကျဘူးတယ်…..အိမ်ထောင်ကွဲသွားတာ….သားသမီး ၃ ယောက်ရှိတယ်…..
လက်ရှိလုံခြုံရေးကင်းတစ်ခုရဲ ခေါင်းဆောင်ပေါ့ကျနော်နေတဲ့မြို့လေးကသိပ်မကြီးတော့….ကင်းစခန်းတခုလုံးမှာလူ ၂၀
လောက်ဘဲရှိတယ်လေ……..တစ်နေ့တော့ ကျနော်တို့ကင်းစခန်းကို နောက်ထပ်တပ်ဖွဲ့ဝင်အိမ်ထောင်သည်မိသားစု
ပြောင်းလာတဲ့မိသားစုကိုနေအိမ်လိုင်းခန်းချပေးဖို့အခက်အခဲဖြစ်တာနဲ့…ကျနော်ယူထားတဲ့ ၂ ခန်းတွဲကို
ကျနော်ယူထားတဲ့ ၂ ခန်းတွဲကလဲ…ကင်းစခန်းဘေးကပ်လျှက်….ကျနော်ရုံးကိစ္စလုပ်ဖို့နဲ့အနားယူဖိုယူထားတာပါ..
ကျနော်က မြို့ထဲမှာအိမ်ရှိတယ်……ကင်းစခန်းထဲမှာက နေ့ဘက်လောက်ပဲနေတာများတယ်လေ…………….
မြန်မာပြည်အနံ့ပြောင်းရွေ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရတဲ့သူပေါ့….ကျမတို့မှာသားသမီး ၂ ယောက်ရှိပီး…သမီးအကြီးက
သူအဖိုးအဖွားတွေနဲ့ရန်ကုန်မှာနေတယ်….သားအငယ် ကတော့ကျမတို့နဲ့အမြဲလိုက်နေတယ်လေ….သူကအခုမ (၅)တန်း
ကျမတိုကမိသားစု ၃ ယောက်ထဲဆိုတော့…အဆင်ပြေတယ်လေ…သူကလဲအိမ်ထောင်မရှိတဲ့သူ….ညဘက်မြို့ထဲကအိမ်မှာ
ရင်သားကြီးကြီးနဲ့….တင်တော့ပြားတယ်…..ကလေး ၂ ယောက်အမေဆိုပေမယ့်….ပြုပြုပြင်ပြင်နေတော့….ကြည့်လိုကောင်းတယ်..
၀တ်တာစားတာကလဲ ဆက်ဆီ ကျတယ်….ဘောင်းဘီအပျော့တွေ….ဂါဝန်တွေအမြဲဝတ်တတ်တယ်…သူများတွေလို ထမီတွေဘာတွေ
“အော်ဟုတ်ကိုကြီး”ဆိုပြီး ဖြူလေးက မျက်လုံးလေးကလယ်ကလယ်နဲ့ကြည့်နေတုန်း…..ကျနော်လဲထိုင်လိုက်ပြီး ဖြူလေးခြေတောက်ကနေ
အထက်ကို တစ်တောင်၊ နှစ်တောင်ဆိုပြီးတိုင်းရင်းသူပေါင်လေးတွေကို..ကိုင်ရင်းလုပ်နေတော့….ဖြူလေးတုန်ကနဲဖြစ်ပီး….ညိမ်နေတာနဲ့
အိမ်ရှေ့မှာ TV ထိုင်ကြည့်နေလိုက်တယ်….ခဏနေတော့…ကိုကြီးပြန်လာပီး…ကျမဖို့ကျမကြိုက်တဲ့အအေးဝယ်လာတာတွေတယ်……..
အလုပ်ကိစ္စနဲ့ထွက်သွားတာပေါ့……ကျမအခန်းထဲက ကုတင်ပေါ်မှာပေါ့တေးဘဲလ်လေးနဲ့ ကိုရီးယားကားကြည့်နေတုန်း….ဖုန်းမည်လာတာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့………..
ကျမယောင်္ကျားဆိုဒီလိုအချက်တွေအများကြီးမလိုးနိုင်ပါဘူး…..၁၀ ချက်လောက်လိုးလိုက် အချက် ၂၀ လောက်လိုးလိုက်…နားလိုက်နဲ့စပ်တငန့်ငန့်ကြီး…ကိုကြီးကတော့…
အခါတွေမှာလဲ…ကျမတို့ဟာခပ်တည်တည်ခပ်တန်းတန်းနေကြတာပါ……ကျမနဲ့ကိုကြီးမတွေဖြစ်တာအခုဆို ၁၀ ရက်ကျော်လောက်ဖြစ်နေပါပီ…..ကျမကို…ကိုကြီးက
နဲ့ စပန့်ကောင်းဘီရှည်အပျော့လေးကိုဝတ်ထားပီးအသင့်စောင့်နေမိပါတယ်….ကျမအမျိုးသား ကိုမျိုးဟာလဲ….၀င်လိုက်ထွက်လိုက်….အလှုပ်များနေတာအိမ်ကနေ…
“ချာတိတ်အရမ်းလှတယ်….အမောကိုပြေသွားတာဘဲသိလား…”…သူပြောမ ကျမထိုင်နေတဲ့နေရာကို သူအခန်းထဲကနေလှမ်းမြင်နေရမှန်းသတိထားမိတယ်……….
ကျမ ၃ ခါလောက်ပီးလို့…ကိုကြီးလီးမှာလဲကျမစောက်ရေဖြူဖြူပြစ်ပြစ်တွေ…..ပေပွနေပါပီ….ကျမလဲမောဟိုက်တုန်ရီနေပီး….တစ်ကိုယ်လုံး….နုန်းချီလိုက်မောနေပီလေ…
TV ထိုင်ကြည့်နေတာပေါ့…..။ နေ့လည် ၁ နာရီလောက်မှာကိုကြီးအိမ်ကိုရောက်လာတယ်….ထုံးစံအတိုင်း….သူအလုပ်တွေနဲ့သူ…စားပွဲမှာအလုပ်များနေတာပေါ့………..။
ကိုမျိုးလဲဘေးကနေကိုကြီးအလုပ်တွေကို ကူလုပ်ပေးနေတာနဲ့…..ကျမလဲ ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲလေးဆက်ကြည့်နေလိုက်ပါတယ်………..။
တော့ပါဘူးရှင်….။ ကိုကြီးနဲ့ကိုမျိုးကတော့…..အလုပ်ကိုယ်စီနဲ့အလုပ်များနေတာပေါ့…..ကိုမျိုးက…ကျမကိုကျောခိုင်းထားပီး….ကိုကြီးက မျက်နှာချင်းဆိုင်အနေအထားပါ…။
သလို……TV ကိုဘဲမျက်တောင်မခတ်ကြည့်နေတာပေါ့…..ကိုကြီးက….ကျမရှေ့က စက်တီစားပွဲပေါ်တင်ထားတဲ့….ဆားငန်စေ့ဘူးလေးထဲက….ဆားငန်စေ့လေးတွေကို……
စောက်ဖုတ်လေးဟာလဲ….မို့ဖောင်းပီး…အရည်တွေစိမ့်ထွက်လာတယ်….။ ကိုကြီးက လီးကြီကို ဆပ်ခနဲဆပ်ခနဲ…..လှုပ်ပြလိုက်ချိန်မတော့….ကျမစောက်ပတ်လေးထဲက
“မီပါတယ်….ငါးကင်က ၁ နာရီလောက်ကြာတာ…အေးဆေးပါ…အာဆိုသွားပီနော်မိန်းမ..”
“ အို….ကောင်းလိုက်တာ…..ဆောင့်ပါ….တအားဆောင့်ပေးစမ်းပါ……..ဆောင့် ဆောင့်…အင်း…….အီး………”လိုကျမညီးညူရင်း…တောင်းခံနေမီတာပေါ့
“ ဖွတ်…ဖတ်..ဖတ်…ဖုတ်…ဖွတ်…ဖတ်…ဖတ်…ဖွတ်…အင့် ဟင့် ဟင့်….”
“ တစောင်းကွေးပြီး လိုးကြရအောင်…နော်ချာတိတ်”ကိုကြီးကကျမကို…..ဖင်ကုန်းလိုးနေရင်းကနေပြောလာတော့…..ကျမလဲ…အင်းလိုတုန့်ပြန်ရင်း…….
“ ဗျစ်….ဘု ဘု…ဘွပ်..”